Pierre-Emerick Aubameyang Oo Rikoor Cusub Ka Dhigay Horyaalka Bundesliga
Saturday, November 17th, 2018 - 16:10:34
Monday September 28, 2015 - 10:49:57 in Wararka by Kubad Bile
(Kubadbile) laacibka kooxda Dortmun Pierre-Emerick Aubameyang ayaa xalay dhigay rikoor ku cusub horyaalka dalka Germany ka dib markii uu dhaliyay labadii gool ee kooxdiisa Borussia Dortmund ee barbaraha.
Aubameyang ayaa noqday laacibkii ugu horeeyay oo ebed gool ka dhaliya todobadii kulan ee ugu horeeysay horyaalka Bundesliga xilligan waxa uuna xalay laba gool ka dhaliyay kulankii 2-2 ay la galeen kooxda Darmstadt.
Weeraryahankan u dhashay dalka Gabon ayaa xalay labada gool u dhaliyay kooxdiisa isaga oo hal daqiiqo iyo sideed sikin ku dhaliyay gool kulankii xalay.
Aubameyang ayaa hadda waxa ay hogaanka horyaalka gooldhalintiisa wada hogaaminayaa ciyaaryahanka Matthias Ginter oo ay wadaleeyihiin min 10 gool,waxa uuna kubbad wanaagsan xalay ka helay Adnan Januzaj markii uu dhalinaayay goolka labaad.
Aubameyang ayaa todobaadkii hore sameeyay in uu kulankiisii lixaad ee furitaanka horyaalka uu goolal dhaliyay kulan kasta lixdaasi kulan ka mid ah.